October 17, 2021 - Babal Khabar
Oct172021 by बबाल खबरNo Comments
पुरा खबर, हरेक ब्यक्तिले निदाएको बेला सपना देख्ने गर्दछन्। धार्मीक मान्यता अनुसार हर सपनाको केहि न केहि अर्थ रहने गर्दछ यस प्रकारका सपनाले ब्यक्तिको जीवनमा घट्ने घ'टनाको अग्रीम जानकारी गराउने मान्यता छ। यस्ता सपनामा देखियो बस्तु वा स्थानले मानिसमा सकारा'त्मक वा नकारा'त्मक दुबै प्रकारका असर पार्ने गर्दछ। कतिपय सपनाले मानिसमा धनलाभको समेत संकेत गर्दछ। कुन -कुन सपनाले मानिसलाई धनवान् बनाउने संकते गर्छ त ? यदि सपनामा कसैले बिरालो, उल्लु र घोडा देख्यो भने ती ब्यक्तिउपर माता लक्ष्मीको कृपा बर्सिने मान्यता छ ।यदि सपनामा आफुले घोडसवारी गरेको देखियो भने आगामी भाग लिएको प्रतियोगितामा सफलता पाउने मान्यता छ । सपनामा घोडा चढेको देखेमा रोकिएको पैसा छिट्टै फिर्ता हुने मान्यता रहेको छ। सपनामा माता लक्ष्मी वा भवानीको दर्शन गरेको देखेमा छिट्टै धनवर्षा हुने मान्यता छ। यदि सपनामा कसैले आभूषण
हेर्नुस यो भिडियो, विवाह फरक फरक ठाँउमा फरक किसिमले गर्ने गरिन्छ विवाहको दिन बेहुलि निकै सुन्दरी देखिने गर्दछन् । त्यस्तै विवाहमा सुन्दरी देखिएकी युवति भोलि पल्ट भने पतिको तगारो बनेकी छिन् । यो घट-ना हो अल्जेरियाको एक युवले बिहे त गरे तर उनले नसोचेको घटना भयो ।बिहेको भोलि पल्ट उनको लागि कालो दिन नै हुन पुग्यो । उनले विवाहको दोस्रो दिन आफ्नो पत्नीलाई देखेर विश्वासै गर्न सकेनन् उनि आफ्नै पत्नि हुन भनेर बिहेको दिन निकै सुन्दरी देखिएकी पत्नि भोलि पल्ट भने रुप नै फेरीएको देखे। एक्कासी पत्निको रुप देख्दा उनी निकै आत्तिए । उनकी पन्ति बिहेको भोलि पल्ट बिना मेकअपमा देखा परेकी थिइन् ।उनलाई देखेपछि उक्त पुरुष निकै आ-त्तिए उनले धुमधाम बाजा बजाएर बिहे गरेकी श्रीमतीले आफुलाई नै धो-का दिएको अारोप लगाए। त्यसै कारणले उनले पत्नी वि’रुद्ध केस हालेका छन् । केस हाल्दै भने ठुलो धो-का भएको र पि
एजेन्सी । संसारमा कहिलेकाँही अनौठो लाग्दा घट‘ना सार्वज्निक हुन्छन् । प्रकृतिलाई नै चु’नौती दिने यस्तो घटनाले हामीलाई अचम्म बनाउँछ । भारतमा एक अनौठो घ’टना सार्वजनिक भएको छ । विविसीले दिएको समाचार अनुसार एक महिला ३२ वर्षदेखि सामान्य जीवन बाँचिरहेकी थिइन् । उनको विवाह भएको ९ वर्ष बितिसकेको थियो र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो चलिरहेको थियो तर अ’चानक उनलाई थाहा भयो कि उनी एक पुरुष हुन् र उनलाई टेस्टिक्यूलर क्या न्स र छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बीरभूममा बस्ने यी महिला शारीरिक रुपमा त महिला हुन् तर आनुवंशिक रुपमा उनी पुरुषको रुपमा जन्मिएकी थिइन् । जब उनको स्थिती अस्पताल पुग्यो तब डाक्टर पनि चकित परे र उनीहरुले यो समस्याबारे थाहा पाउनका लागि एउटा लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनु पर्यो । त्यसपछि थाहा भयो कि यी महिलालाई एन्ड्रोजन इन्सेन्सिटिभिटी सिन्ड्रोम छ जसमा व्यक्तिको शरीर महिलाको हुन्छ तर क्र
हेर्नुस भिडियो, यस संसारमा बिभिन्न व्यक्ति छन् र मानिसहरुको बिभिन्न र विशिष्ट शौकहरु छन्। सायद तपाईंले सुन्नुभएको छ कि कुनै पनि व्यक्तिले ढुंगा खान्छ र पेट भर्छ। यो सुन्न तपाईंलाई थोरै अनौंठो लाग्छ, तर यो सहि छ यो व्यक्तिले ढुंगा खानालाई मनपर्दछ, माटो, बालुवा र ढुंगा खाएर पेट भर्छ। यस मानिसलाई माटो चाट्न मन पर्छ। यो मान्छे एक दिनमा तिन किलोग्राम माटो र ढुंगा खान्छ। तपाईंलाई यो सुन्दा चकित भएको हुनुपर्छ, तर यो सही छ। यो मानिस कर्नाटकको गाउँका हो। बाल्यकालदेखि नै ढुंगा र माटो खाने बानि थियो रतिस बर्षे पाक्किरप्पा हुआगुंडी बाल्यकालदेखि नै ढुंगा खाने मनपराउँथे। यसको माटो खाने बानी एक कारण होइन, यदि यसले माटो चोर्नु अघि खान्छ भने यो सँधैको लागि बानी भएको छ। र त्यो बानीले उनलाई दिनभर करिब ३ किलो कांकेर ढुंगा खुवाउँदछ। दैनिक ३ किलो माटो यो अचम्मको कुरा हो कि प्रत्येक दिन ३ kg कि
पुरा खबर, गत केहिसमय हाम्राे रितिरिवाजका अनुसार हामि सँग भएका केहि सामान वा छरछिमेकमा भएका केहि सामान पैचाे माग्ने वा दिने गर्थ्याे, तर याे रितिरिवाज भने अहिले हट्दै गएकाे छ । अरुसंग मागेर कुनै सामाग्री चलाउने बानि छ भने त्यो बानी त्याग्नु नै राम्रो हुन्छ । यो बानि आफै माथि समस्या निम्त्याउने कारक बन्ने धार्मीक मान्यता छ । धार्मीक मान्यता अनुसार कतिपय अवस्थामा अरुसंग सामान मागेर काम चलाउने बानिले नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न भई हानि पुर्याउने गर्दछ ।तसर्थ ति सामाग्री प्रयोग मागेर गर्नबाट बच्नुपर्दछ, १. काइँयो– स्वास्थ्य मात्र नभई भाग्यका दृष्टिमा पनि अरुको काइँयो प्रयोग गर्नु हानिकारक मानिन्छ । यसरी अरुको काइँयो प्रयोग गर्दा टाउकोसंग सम्बन्धित बाधाहरु उत्पन्न हुनसक्छ । यसका अलावा भाग्यमा विपरीत असर समेत पर्न सक्छ । २. ओच्छ्यान– धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ अरुको ओच्छ्यानमा सुत्दा समेत
काठमाडौँ । कहिलेकाहीँ पशुपक्षी र जीवजन्तुले भविष्यमा हुनसक्ने विभिन्न किसिमका घ'टनाका बारेमा अवगत गराइदिन्छन्। घरमा पाइने माउसुलीले भविष्यमा हुने धेरै घ'टना बताइदिन्छन् । यो वर्णन शकुन शास्त्रमा गरेको पाइन्छ । जानौं माउसुली सँग जोडिएका शकुन तथा अपशकुनःनयाँ घरमा प्रवेश गर्ने समयमा गृहस्वामीले म'रेको वा माटो लागेको माउसुली देखेमा उक्त घरमा बस्ने मानिस रो'गी हुन सक्छन् । यस अपश'कुनबाट बच्नका लागि पूर्ण विधिवि धानका साथ पूजन गर्नुपर्छ। माउसुलीले का'मक्री'डा गरेको देख्नुभयो भने कुनै पुरा'नो मित्रसँग भेट हुनसक्छ। दुई माउसुली झग'डा गरेको देख्नुभयो भने तपाईंको कसैसँग वैम'नस्य हुन सक्छ । दिउँसो खाना खाँदा माउसुलीको आवाज सुन्नुभयो भने छिट्टै कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ । तर यो दुर्लभ नै हुन्छ किनकि माउसुलीहरू प्रायः रातमा मात्र आवाज निकाल्छन्। शरीरको कुन अंगमा खस्दा के फल ?